एक घण्टाभन्दा बढी शारिरीक सम्बन्धबिना बस्न सक्दिनन् यी अभिनेत्री ! « हाम्रो ईकोनोमी
एक घण्टाभन्दा बढी शारिरीक सम्बन्धबिना बस्न सक्दिनन् यी अभिनेत्री !
आजकाल बलिउड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर अनन्या पाण्डेसँग मस्ती गरिरहेको देख्न सकिन्छ । आजकाल उनी बलिउडको निकै चर्चित फिल्म ‘पती–पत्नी और वो’ को रिमेकमा काम गरिरहेकी छिन् ।
यसबाहेक उनको ‘साँडकी आँख’ पनि यसै वर्ष रिलिजको लागि तयार छ । त्यसकारण उनी कुनै न कुनै कारणले चर्चामा छाइरहन्छिन् । तर उनलाई एउटा भिडियोले थुप्रै महिनासम्म चर्चित बनाएको थियो । फिल्म शुभ मंगल सावधानपछि अभिनेत्री नेहा धुपियालाई दिएको अन्तरवार्ता निकै चर्चित भएको थियो ।
वास्तवमा ‘दम लगा के हईशा’ र ‘शुभ मंगल सावधान’ मा सँगै काम गरिसकेका आयुष्मान खुराना र भूमि पेडनेकर एक अर्काबारे धेरै नै जानकार छन् । र त टिभी शो बीएफएफ वोगमा एक–अर्काबारे खुलासामाथि खुलासा गरिरहेका थिए । नेहाले एउटा प्रश्न सोधेकी थिइन् जसका कारण भूमिका ट्रोलिङको शिकार हुनुपरेको थियो ।
आउटडोर हुँदा सेक्सबाट टाढा हुन्छन् आयुष्मान खुरानाः
वास्तवमा कार्यक्रममा कुराकानीका बेला नेहाले सेक्सबारे प्रश्न सोधेकी थिइन् । सुरुमा नेहाले आयुष्मानलाई सेक्सबिना कति दिन बस्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधिन् । यसमा आयुष्मानले आउटडोर हुँदा उनी सेक्स बिना बस्न सक्ने जवाफ दिए ।
भूमिको प्रश्नको जवाफ पनि आयुष्मानले नै दिएः
नेहाले यो प्रश्न भूमिमाथि तेर्साइन् आयुष्मानले तत्काल बोलिहाले, ‘एक घण्टा’ । तर आयुष्मान यतिमा मात्रै रोकिएनन् । त्यसपछि उनी भूमिलाई डेट गर्ने इच्छा राख्ने पुरुषलाई टिप्स दिन थाले ।
उनले भने, ‘ती व्यक्तिले बेडमा निकै धैर्यता अपनाउनुपर्छ । ’ यसमा भूमिले भनिन्, ‘हो, मलाई स्लो रोमान्स मनपर्छ ।’
स्मरण रहोस्, उनीहरुले यस्ता कुरा रमाइलाको लागि गरिरहेका थिए ।
आयुष्मान र भूमिलाई पछिल्लो पटक ‘शुभ मंगल सावधान’ मा सँगै देखिएको थियो ।